khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal तिन मुखे तीन दल, फेर्लान त ओली ! – khabarmuluk.com
तिन मुखे तीन दल, फेर्लान त ओली !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न भगीरथ प्रयासमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मन राखिदिन आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन दलको बैठक डाकेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिन भन्द बोलाइएको बैठकमा पुग्ने तीन दलका मुख भने तीनतिर फर्किएका छन् ।
ओलीलाई हटाउन सबैभन्दा बढी हतारो जसलाई छ, ऊ आफैमा राजनीतिक र नैतिक रुपमा कमजोर छ । उसको संसदीय शक्ति दिनदिनै ख्याउटिँदै गएको छ । हिजो मात्र चारजना संघीय सांसद गुमाएको माओवादी एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव समेत राख्न सक्दैन । तैपनि, उसले कम्तीमा पाँचजनालाई प्रधानमन्त्रीको पद बाँडिसकेको छ ।
सबभन्दा पहिला माधव नेपालसँग मिलेर प्रचण्डले आफैलाई नेकपाको संसदीय दलको नेता चयन गरे र प्रधानमन्त्रीका लागि कसरत अघि बढाए । त्यसपछि पार्टी एक नरहेपछि शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको पद टक्र्याउन पुगे । देउवाले उत्साहजनक प्रतिक्रिया नदिएपछि प्रचण्ड रामचन्द्र पौडेल, महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराई समेतलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्यो भन्दै हिँडेका छन् । ती सबै प्रस्तावित प्रधानमन्त्री एकै ठाउँमा बसेका बेला प्रचण्डले के भन्छन् भन्नेचाहिँ रोचक प्रतीक्षाको विषय छ ।
उता नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीको संस्थापन पक्ष भने तत्काल सरकारमा गइहाल्नेभन्दा पनि ताजा जनादेशको पक्षमा छ । यद्यपि, चुनाव गराउने सरकार भने फेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यी दुवैको इरादा छ । फेर्न सजिलो नरहेकोमा भने यी दुवै दलका नेता भलीभाँती जानकार छ । त्यसैले चुनाव पर धकेलिनुभन्दा सरकार हेरफेर नगरिकनै चुनावमा जानुमा यी दुई दलले सुरक्षित ठानेका छन् ।
जनता समाजवादी दलको संस्थापन ९महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो० पक्षले भने माओवादीले ओलीको साथ छाड्नेबित्तिकै सरकारमा जाने सुर कसेको छ । उसले खुट्टा उचालेर बसेको छ । अहिलेकै अवस्थामा जसपा सरकारमा जाने हो भने ताजा जनादेशको सम्भावना टर्ने भय पनि कांग्रेसमा छ । किनभने, बहुमतको सरकार आउँदो दुई वर्ष ढुक्कले चल्ने जोखिम छ । त्यसैले कांग्रेस र माओवादीको जोड जसपाको सत्तारोहण रोक्नमा छ ।
माओवादीले आफ्ना बहकिएका सांसदलाई कारवाही गरेपछि अब कारवाहीको डण्डा एमालेका विभाजित सांसदहरुमाथि चल्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टीबाट कारवाही गरिसकेकाले अब सांसद पद धेरै दिन रहने छैन । ओलीको एक पत्रका भरमा उनीहरु सडकमा पुग्नेछन् । त्यसैगरी नेपाल पक्षमा लागेका करिब २३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ओलीको कारवाही सूचीमा छन् ।
ओलीले आफ्ना विरोधी कमजोर बनाउने क्रममा माओवादीका चार सिट घटाउन सफल भइसकेका छन् भने जसपाका २० भन्दा बढी सिट आफूतिर पारी जम्मा १० सिट मात्र उपेन्द्र यादवतिर रहने स्थिति बनाइसकेका छन् । एमाले र जसपाको जो सांसद ओलीको समर्थन गर्दैनन्, तिनीहरु कारवाहीमा पर्नेछन् । त्यसो गर्दा अब एमालेका २३ र जसपाका १० सांसद कारवाहीमा परेर निलम्बिन हुन सक्नेछन् । चारजना सांसद विभिन्न मुद्दाका कारण निलम्बित अवस्थामै छन् ।
यो सबै हिसाब गर्दा संसदमा कायम रहने सदस्य संख्या बढीमा २ सय ३४ हुन्छ र त्यसका लागि १ सय १७ जना सांसदले ओलीलाई समर्थन गरे सरकार टिक्न सक्छ । जसपाको ठूलो हिस्सा सरकारमा मिसिन तयार भएकाले ओली सुरक्षित देखिन्छन् । आफू सुरक्षित भएकैले उनमा बढी नै आत्मविश्वास पनि देखिन्छ ।
यदि आफ्नो पक्षमा बहुमत नआएमा ओलीले फेरि संसद विघटन गरिदिनेछन् । विघटनको मुद्दा फेरि अदालत जानेछ । अदालतले फेरि पुनर्स्थापना गर्न भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
यसै पनि ठूलो संख्याका सांसद कारवाहीमा परेर पद रिक्त हुँदा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । बरु ताजा जनादेश नै उचित हुन्छ भनेर राजनीतिक तहमा एक प्रकारको अनौपचारिक समझदारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड ओलीलार्इृ हटाउन असमर्थ भएपछि ओलीविरोधी दलहरुलाई समेटेर चुनावी गठबन्धनको प्रयासमा लागेका छन् । यसरी हेर्दा मुलुकमा ताजा जनादेशकै लागि वातावरण बनिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति:चैत २७, २०७७